Joshụa 17 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ala ebo Manase ketara n’ebe ọdịda anyanwụ (1-13)
Ala ọzọ ụmụ Josef ketara (14-18)
17 Mgbe e fere nza,+ e nyere ebo Manase,+ bụ́ ọkpara Josef,+ ala. Ebe ọ bụkwa na Mekia,+ bụ́ ọkpara Manase na nna Gilied, bụ dike n’agha, e nyere ya Gilied na Beshan.+ 2 E fekwara nza tupu e nye ụmụ Manase ndị fọrọnụ ala, n’ezinụlọ n’ezinụlọ. Ha bụ: ụmụ Abi-iza,+ ụmụ Hilek, ụmụ Asriel, ụmụ Shikem, ụmụ Hifa, na ụmụ Shemaịda. Ndị a bụ ụmụ Manase nwa Josef, ụmụ ya ndị nwoke, n’ezinụlọ n’ezinụlọ.+ 3 Ma Zelofehad+ nwa Hifa, nwa Gilied, nwa Mekia, nwa Manase, amụtaghị nwa nwoke. Ọ mụrụ naanị ụmụ nwaanyị. Aha ha bụ: Mala, Noa, Họgla, Milka, na Teza. 4 Ha wee bịakwute Elieza+ onye nchụàjà na Joshụa nwa Nọn na ndị isi, sị: “Jehova gwara Mosis ka o nye anyị ala n’ebe ụmụnne anyị ndị nwoke ketara ala.”+ N’ihi ya, e nyere ha ala ebe ụmụnne nna ha ketara ala, otú Jehova kwuru ka e mee.+ 5 Manase ketakwara ibé ala iri ọzọ ma e wezụga ala Gilied na ala Beshan, ndị dị n’ebe ọwụwa anyanwụ Osimiri Jọdan.+ 6 Ihe mere e ji kenye ha ya bụ maka na ụmụ Manase ndị nwaanyị so ụmụ ya ndị nke nwoke keta ala ha. E nyeziri ụmụ Manase fọrọnụ ala Gilied. 7 Ala Manase malitere n’Asha ruo Mikmitat,+ nke dị ebe e si aga Shikem.+ O sikwa ebe ahụ gara ruo ebe ndịda,* ruokwa n’ala ndị En-Tapua. 8 Ala Tapua+ ghọziri nke Manase. Ma, ọ bụ ụmụ Ifrem nwe obodo Tapua nke dị n’ókè ala Manase. 9 Ala Manase ruru n’ebe ndịda Ndagwurugwu Kena. E nwekwara obodo Ifrem ụfọdụ dị n’ala Manase.+ Ala Manase sikwa n’ebe ugwu nke ndagwurugwu ahụ kwụsị n’oké osimiri.+ 10 Ebe ndịda bụ nke Ifrem, ebe ugwu abụrụ nke Manase, ma ọ kwụsịrị n’oké osimiri.+ N’ebe ugwu, ala Manase* ruru n’ókè ala Asha. N’ebe ọwụwa anyanwụ, o ruru n’ókè ala Ịsaka. 11 N’Ịsaka nakwa n’Asha, e nyere Manase Bet-shian na ime obodo ndị dị ya nso,* Ibliam+ na ime obodo ndị dị ya nso, ndị bi na Dọọ+ na ime obodo ndị dị Dọọ nso, ndị bi n’En-dọọ+ na ime obodo ndị dị En-dọọ nso, ndị bi na Teanak+ na ime obodo ndị dị Teanak nso, na ndị bi na Megido na ime obodo ndị dị Megido nso. Obodo atọ n’ime obodo ndị a dị n’ugwu. 12 Ma, ụmụ Manase enwelighị ike iweghara obodo ndị a. Ndị Kenan gbara isi akwara biri n’ala a.+ 13 Mgbe ndị Izrel bịara sie ezigbo ike, ha manyere ndị Kenan ka ha na-arụrụ ha ọrụ,+ kama ịchụpụ ha niile n’ala ahụ.+ 14 Ụmụ Josef wee sị Joshụa: “Anyị dị ọtụtụ maka na Jehova na-agọzi anyị ruo ugbu a.+ Gịnịzi mere i ji kenye anyị naanị otu ibé ala mgbe e fere nza?+ Gịnịkwa mere o ji bụrụ otu ibé ala ka anyị ketara?” 15 Joshụa wee sị ha: “Ọ bụrụ na unu dị ọtụtụ, gaanụ n’oké ọhịa ala ndị Perizaịt+ na ndị Refeyim,+ jirikwanụ aka unu sụọ ebe ahụ ka unu biri na ya, ebe ọ bụ na ala Ifrem bụ́ ugwu ugwu+ abaghị unu.” 16 Ụmụ Josef asị ya: “Ebe ahụ bụ́ ugwu ugwu agaghị aba anyị. Ndị Kenan nwekwara ụgbọ ịnyịnya agha+ ndị a rụnyere ogologo mma n’ụkwụ ha,* ma ndị nke bi n’ala dị na ndagwurugwu, ma ndị nke bi na Bet-shian+ na ime obodo ndị dị ya nso,* ma ndị nke bi na Ndagwurugwu Jezril.”+ 17 Joshụa asị ụmụ Josef, ya bụ, Ifrem na Manase: “Unu dị ọtụtụ, unu sikwara ezigbo ike. A gaghị ekenye unu naanị otu ala,+ 18 kama unu ga-eketakwa ebe ahụ bụ́ ugwu ugwu.+ Ebe ọ bụ oké ọhịa, sụọnụ ya. Ọ ga-abụkwa ebe ala unu ga-akwụsị. Chụpụnụ ndị Kenan, n’agbanyeghị na ha siri ike, nweekwa ụgbọ ịnyịnya agha ndị a rụnyere ogologo mma n’ụkwụ ha.”*+
^ Na Hibru, “ruo n’aka nri.”
^ Na Hibru, “N’ebe ugwu, ha.”
^ Na Hibru, “ụgbọ ịnyịnya agha ígwè.”